🍒Nyochaa saịtị nke cha cha chara chaa n'ịntanetị FastPay 2021
Banyere Companylọ ọrụ FastPay
FastPay Casino >Nyochaa saịtị nke cha cha chara cha cha FastPay
Nyochaa saịtị nke cha cha chara cha cha FastPay
Weebụsaịtị FastPay ka amabeghị ndị niile nwere mmasị n'ịgba chaa chaa, ebe ọ bụ na cha cha pụtara naanị na 2018. Mgbe ị gara na ya, ọ ga-apụta ozugbo na nke a bụ ọrụ dị mma. Saịtị ahụ na-enye ohere ịnweta ozi niile gbasara FastPay - ikikere, oke elu, wdg.
FastPay ntanetị cha cha n'ịntanetị
A sụgharịrị ebe nrụọrụ weebụ cha cha n'asụsụ Russian, Bekee, Finnish, Turkish, Ukraine, Spanish, Swedish, Polish, Japanese na asụsụ ndị ọzọ. Nhọrọ ha na-agbasa kwa afọ. Saịtị nwere ọkọlọtọ na mobile version. A na-emegharị saịtị maka smartphones maka egwuregwu site na iji touchpad, na-agbanwezi na-akpaghị aka na ihuenyo ekwentị na mbadamba mgbe ị gara.
Isi menu bụ n'elu nke ukwuu. Ihe ndị a na-anọchi anya ya:
ngwa ngwa Fastpay;
ụdị nbanye - maka ikike, ịkwesịrị ịnye adreesị ozi-e na paswọọdụ;
njikọ na ngalaba"Banyere anyị","Asọmpi","Nkwado","mentskwụ"gwọ","Nkwado";
bọtịnụ imeghe ụdị ndebanye;
bọtịnụ iji họrọ asụsụ interface.
Enwere nnukwu ọkọlọtọ n'okpuru menu. O nwere ozi gbasara nkwalite, asọmpi ugbu a, akụkọ ụlọ ọrụ, wdg.
Akụkụ akụkụ nke isi ihuenyo raara nye ụlọ egwuregwu. Ọ gụnyere menu maka igodo ngwangwa n’etiti ngalaba:
"Ohere mepere" - igwe oghere;
Live - egwuregwu bọọlụ, egwuregwu TV na ndị na-ere ahịa;
"Egwuregwu ọhụrụ" - ihe ọhụrụ;
Roulette - ụdị dị iche iche nke roulettes;
"Zụta Njirimara" - oghere nwere ikike ịzụta agba agba;
"Bitcoin, ETH, LTC" - igwe nwere ikike ịkụ nzọ na cryptocurrency.
N'okpuru menu enwere ụdị maka nyocha egwuregwu na aha. N'ebe a, ị nwere ike igosipụta egwuregwu nke otu ndị na-eweta ọrụ. Na mkpokọta, saịtị ahụ nwere ihe karịrị ndị mmepe 30 - Yggdrasil, Tomhorn, Kagaming, iSoftBet, Microgaming, wdg. Egwuregwu niile kwadoro ma nwee sistemụ arụmọrụ na-ewu ewu.
N'okpuru ebe a bụ egwuregwu sitere na ngalaba ahọpụtara. Ngwaọrụ ngwa ngwa FastPay kwesiri ịnọ n'ọnọdụ enwere onwe. You chọghị ịdebanye aha maka ịgba ọsọ oghere na ọnọdụ ngosi.
Ibe obibi na-egosiputa ozi banyere ndị mmeri kachasị ọhụrụ, mmeri kachasị elu na jackpots meriri.
Na ala nke gọọmentị gọọmentị FastPay enwere ozi gbasara iwu, njikọ na"nkwekọrịta onye ọrụ","Usoro na Ọnọdụ", ngalaba nrụtụ aka. Ndabere nke saịtị ahụ bụ ọchịchịrị, na akara na njikwa dị ọkụ ma na-akpali akpali. Nchikota a mara ezigbo mma ma mara mma.
Nkwado Ndị Ahịa FastPay
Casino ngwa ngwa na-enye nkwado ndị ahịa n’oge elekere. Maka ajụjụ na nchegbu, biko kpọtụrụ:
email email - njikọ nwere ike ịchọta na ngalaba Nkwado;
site na usoro tiketi - ụdị maka izipu arịrịọ dị na ngalaba"Nkwado";
site na nkata n'ịntanetị - njikọ ya dị na akụkụ aka nri ala.
Azịza nye ajụjụ ndị a na-ahụkarị ka enyere na ngalaba"Ajụjụ".
FastPay Ego ịkwụ ụgwọ
Ozi gbasara sistemụ ịkwụ ụgwọ akwadoro, nkwụnye ego na nkwụnye ikike ka enyere na ngalaba"Paykwụ"gwọ" na"Usoro na Ọnọdụ". Na cha cha FastPay ị nwere ike imeghe akaụntụ na dollar, euro, Norwegian krone, Australian, Canada na New Zealand dollars, yen, zloty, South Africa rand, cryptocurrencies a ma ama - DOGE, BTC, BHC, ETH, LTC, USDT. Otu onye ọkpụkpọ nwere ike iji ọtụtụ ego - ị nwere ike itinye akaụntụ na ego dị iche iche mgbe ndebanye aha.
A na-eme nkwụnye ego na FastPay n'otu ntabi anya, iwepụ ego n'ọtụtụ ọnọdụ ka emere n'ime awa 2. N'ihe banyere sistemụ na-ebugharị ọsọ, iwepụ nwere ike iwe rue ụbọchị azụmahịa atọ.
Oke maka nkwụnye ego na nwepu ego:
ego nkwụnye ego pere mpe - 1 DOGE, 0.01 USDT, 0.01 LTC, BHC, ETH, 0,0001 BTC, 10 USD, 150 ZAR, 10 EUR, 13 AUD, CAD, 87 NOR, 14 NZD, 1066 JPY, 37 PLN./li>
Ọnụ ọgụgụ kachasị nke ntinyeghachi otu oge (dabere na usoro ahọrọ) - 4000 USD, EUR, 426398 JPY, 60460 ZAR, 34635 NOR, 5191 AUD, 5069 CAD, 14970 PLN. Onweghi oke onu ogugu nke cryptocurrencies.
Ego kacha nta - 20 USD, EUR, 300 ZAR, 26 AUD, CAD, 175 NOR, 28 NZD, 2100 JPY, 75 PLN, 0.001 BTC, 0.01 ETH, 20 USDT, 1000 DOGE, 0.01 LTC, BCH./li>
Enweghị ihe karịrị 4000 USD, EUR, 426398 JPY, 10 ETH, BCH, LTC, 10000 DOGE, 1000 USDT, 60460 ZAR, 34635 NOR, 5191 AUD, 5069 CAD, 14970 PLN nwere ike ịbepụ kwa azụmahịa. >
Thelọ cha cha na-ahazi asọmpi maka ndị egwuregwu na oge niile. Ha na-enye ego efu na onyinye ego. Ndị na-egwu egwu na-ewere otu n'ime ebe 50 mbụ na-enweta ụgwọ ọrụ. Iji sonye n'asọmpi, ịkwesịrị ịga ngalaba"Asọmpi", debanye aha na asọmpi kwesịrị ekwesị. Tupu i sonye, ​​biko jiri nwayọ gụọ usoro na ọnọdụ ya.
A na-ekesa onyinye ego a na-agbado site na isi ihe a gbakọtara. A na-enye ha ụgwọ maka itinye nzọ na egwuregwu ndị asọmpi ahụ kpuchiri.
Ego na-enye maka ndị ahịa cha cha FastPay
Ihe onyinye bonus FastPay bụ nke onyinye ndị a na-anọchi anya:
ego ego. Nweta dika pasent nke ego di elu - 50, 60, 65, 75, 100 na 150%. Nkwụnye ego dị maka ndị ahịa ọhụrụ na ndị dị ugbu a. Ndị ahịa ọhụụ nwere ike ịtụ anya ụgwọ ọrụ nkwụnye ego nke mbụ na nke abụọ. Dịka akụkụ nke mbụ, ndị egwuregwu nwetara 100 EUR, USD, 44,000 DOGE, 1.9 LTC, 0.5 BCH, 0.256 ETH, 370 PLN, 10,066 JPY, 140 NZD, 1,500 ZAR, 870 NOR, 130 CAD na AUD, dabere na ego nke ndozi. Ọzọkwa, ihe ọkpụkpọ ahụ na-enweta n'efu. Oke kachasị nke ego FastPay maka ego nke abụọ dị okpukpu abụọ karịa nke mbụ. A na-enyekwa ego nkwụnye ego maka ndị isi na Tuesday na Friday, mana ndị egwuregwu niile adịghị.
Enweghị ego nkwụnye ego. E nyere ndị ahịa cha cha aka iru ọkwa ọhụrụ na mmemme iguzosi ike n'ihe, yana Satọde ọ bụla n'ụdị nke spins n'efu. Bonusesbọchị Satọdee ga-agbado elu-izu gara aga.
Cashback. Akwụ ụgwọ ndị egwuregwu ruru opekata mpe ọkwa 9 na usoro iguzosi ike n'ihe. A na-ebo Cashback ebubo n'ụdị 10% nke ego ọghọm niile dị na oghere kwa ọnwa. Ọ naghị emetụta n ’ego daashi.
Koodu nkwado. Koodu nkwado nke enyere gi aka inweta ego ma obu ego efu. A na-enye ha ndị egwuregwu na-arụ ọrụ, na-ebipụta kwa oge na listi nzipu ozi mgbasa ozi na ọwa gọọmentị FastPay Telegram.
Enwere ike ịchọta ndepụta onyinye ngwa ngwa FastPay cha cha na"Nkwado".
Enyo nke FastPay online cha cha
plọ cha cha cha cha cha na-enye ebe ị ga-etinye na ebe nrụọrụ weebụ FastPay na enyo ya. Enyo FastPay dị iche na saịtị saịtị naanị na URL. Ọ nwere arụmọrụ zuru oke, interface, na-enye ndị ahịa cha cha ohere iji ike nke akaụntụ nke aka ha, nata ego.
Igwe gosipụtara ngwa ngwa na-enyere cha cha aka:
kesaa ibu n'etiti saịtị;
nye ndị ahịa ohere ịnweta ikpo okwu egwuregwu, n'agbanyeghị ihe ndị dị na mpụga na nke ime - igbochi isi ngalaba site na ndị na-eweta Internetntanetị, ọrụ teknụzụ.
Weebụsaịtị gọọmentị FastPay na-ekwe nkwa nchekwa nke data nkeonwe na azụmahịa azụmaahịa. Ọ na-enye nnukwu ịgba chaa chaa egwuregwu - onye ọ bụla nwere ike ịhọrọ nke dabara adaba maka onwe ya.